Faayilii - Pirezdaantii Naannoo Somaalee Musxafee Mohammad Umar
Ityoophiyaa Kaabaa keessatti wal waraansii gaggeffamaa jiru kan bulchiinsoota lama gidduu ituu hin ta’iin mootummaa fi shoroorkeessa jechuun kan waaman Hiwaat giddutti kan gaggeefamuu ta’u prezidaantiin bulchiinsa naannoo somaalee obbo Musxafee Mohammad Umar RSAf ibsanii jiru.
Hiwaat bulchiinsoota naannoo maraaf balaa kan qabu ta’uun amma ifa ta’aa dhufeera jedhanii, bulchiinsa naannoo Somaalee dabalatee bulchiinsoonni miseensoota Federeeshinii ta’an waraana isaanii ergaa kan jiran kana tilmaama keessa galchuun jedha.
Mootumaan fedeeraalaa qophii qonnaaf jecha akkasumas dhiyeessii gargaarsaaf akka toluutti waraana isaa Tigraay keessaa baasuu isaa murtii sirrii ture kan jedhan Musxafeen Hiwaat garu akka waan injifannoo dirree waraanaatti argateetti lakka’uun loola biraaf ka’uun sirri miti jedhan.
Duraan mootummaan tarkaanfii seera kabajsisuu ennaa fudhataa turee dhukaasa dhaabinsaaf irra deddebi’anii gaafataa kan turan hawaasnii addunyaa Hiwaat bulchiinsa naanoo kanneen birootti illee duula waraanaa ennaa hammeessu garu calliinsaan ilaalan jedhan musxafeene.
Faayilii - Pirezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, Obbo Shimalis Abdisaa
Haala wal fakkaatuun kaleessa magaala Gondar keessa kan turan prezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa garee shoroorkeessaa jechuun kan waaman Hiwaat duullii waraanaa banee tokkummaa Itiyoophiyaa irratti halleellaa agaamamee waan ta’eef lammiwwan biyyatti gama hundaan walii wajjiin socho’uun of irraa qolachuu qabu jechuun dubbachuu isaanii tajaajiilli oduu Itiyoophiyaa gabaasee jira.
Uummnni Oromiyaa keessaa fi mootummaan bulchiinsa naannoo oromiyaa dhimmootii Itiyoophiyaa irratti balaa fiidan dhabamsisuuf uummata obboleeyyan isaa ta’an waliin wareegama baasuuf qophii ta’u isaa Obbo Shimallis hubachiisan jechuun tajaajiilli oduu Itiyoophiyaa gabaasee jira.
Dubbii himaan Hiwaat Geetaachoo Raddaa garu lafa warra Amaaraan seeraan ala nujalaa qabamee gadhiisisuu bira darbee ajandaa biraa hin qabnu jechuu isaanii Roytarsii gabasee jechuun Addis Chakkool gabaasee jra